Zon’ny olom-pirenena amin’ny fifidianana Maro ny tsy mbola fantatry ny olona akory
Fandravana ny Antenimierandoholona Aza fitahana ny vahoaka, hoy José kely
Anisan’ny mason-tsivana ho an’ny olona mendrika antsoina hoe filoham-pirenena, hoy ny kandida ho filoham-pirenena, José Andrianoelison na José kely,
Kandida Ratsietson « Tsy misy firenen-dehibe mamatsy ahy izany »
Nalaza tato ho ato fa maro amin’ireo kandida no natonin’ireo rosianina. Akaiky ny toeram-ponenan’ny masoivohon’ity firenen-dehibe iray ity no misy ny 1 amin’ny birao fiasan’ny kandidan’ny antoko FMI Ma, Jean Jacques Ratsietson, etsy Mahatony.
Tabera Randriamanantsoa « Ampian’ny mpandraharaha Malagasy aho. »
Mbola miantso fifampiresahana amin’ireo hery politika malagasy rehetra ihany hatramin’izao na dia teo aza ny fandavan’ny avy eo anivon’ny filakevi-panjakana ny fangatahana napetrany teo anivon’ity rafitra ity ny filohan’ny antoko Kintana sady kandida ho filoham-pirenena,
Paul Mpody « Hatsangano ny CES »
Mba hisorohana ny fizotry ny fifidianana eto amintsika dia nandroso soso-kevitra ny antoko Rassemblement pour la Democratie Republicaine (RDR) tarihin`i Paul Mpody, amin`ny fananganana fitsarana manokana momba ny fifidianana na « Cour Electoral Spécial (CES) ».
Andry Rajoelina Tsy mahazaka demokrasia…
Voambolana matetika ampiasain’ireo mpanao politika rehefa fotoam-pifidianana toy izao ny demokrasia. Anisan’ny tena miandrandra izany ny filohan’ny tetezamita teo aloha Andry Nirina Rajoelina kanefa izy indrindra no tsy mahazaka. Voaporofo tokoa io tamin’ny fanakanana ireo mpianatra tsy nitovy hevitra taminy nandritra ny loabary an-dasy tany Parisy ny herinandro lasa teo.
Famatsiam-bolan’ny fifidianana Sioka tokana dia milamina ny an’i Dada !
I Marc Ravalomanana irery hatreto no efa nanambara tamin’ny fomba ofisialy tany Antsirabe ny sabotsy 15 septambra lasa teo fa hisokatra tsy ho ela ny Tahiry ho fampandaniana ny kandida Ravalomanana, araka ny tondroin’ny lalam-pifidianana.
Fiatrehana ny fifidianana Nanolotra 500 000 euros ny Alemana
Nanolotra vola mitentina 500 000Euros hoenti-manampy an’i Madagasikara amin’ny fiatrehana ny fifidianana ny firenena Alemà, soloin’ny Ambasadaorony miasa sy monina eto Madagasikara Harald Gehrig tena.
Manamarina ny anarana ao anaty lisitra hatramin’ny 31 janoary ihany hatreto no tena heno sy hita ho miverimberina matetika voizin’ny fitondram-panjakana eny amin’ny haino aman-jery fa na ny tokony hatao eo anelanelan’ny 31 janoary hatramin’ny 15 aprily, izay fotoana hikatonan’io lisitra io aza tsy ampy be dia be ny fanazavana mikasika azy.
Tsy henoheno mihitsy, ohatra, ny voalaza ao amin’ny andininy faha-3 ao amin’ny lalàna mifehy ny fifidianana manambara fa ny olom-pirenena rehetra feno 18 taona “amin’ny datin’andron’ny fifidianana” dia manan-jo handatsa-bato rehefa tsy olona voararan’ny lalàna. Toy izany koa ny mikasika ireo vaomiera misahana ny fanoratana ny anaran’ny mpifidy voalaza ao amin’ny andininy faha-10 sy faha-13 manambara fa solontena 4 isaky ny vakim-paritra eny amin’ny fokontany sy 2 avy amina fikambanana tsy miankina (ONG na hafa) nahazo alalana manokana hanao fanabeazana olom-pirenena sy hanara-maso no azo tendrena ho vaomiera mpanara-maso. Misy ny fanamarinana anarana azo atao aorian’ny datin’ny 31 janoary satria ny lisi-pifidianana nankatoavin’ny vaomieram-pifidianana eo anivon’ny distrika dia averiny eny anivon’ny fokontany aorian’io daty io mba hatao peta-drindrina eny amin’ny biraom-panjakana na toerana fivorian’olona. Izay nahita ny anarany dia omen’ny vaomiera tapakila fanamarinana izany. Izay voamarina fa tsy tafiditra ao anaty lisitra kosa dia afaka manao fitarainana am-bava na an-tsoratra ao amin’ny biraom-pokontany ary raketina ao anatin’ny rejistra manokana natokana ho amin’izany ny anarany ary atakalo tapakila ihany koa. Hatreto dia ny avy eo anivon’ny komity mpanara-maso ny fiainam-pirenena na ny KMF CNOE sy ny dingana ho amin’ny fampandrosoam-pirenena na DFP ihany aloha izany no heno fa nanana tetikasa hitety faritra hanao fanabeazana momba ny fifidianana saingy raha ny heno dia sahirana eo amin’ny enti-manana izy ireo. Ny KMF CNOE dia tsy henoheno intsony taorian’ireo atrikasa 2 herinandro vitan’izy ireo tamin’ny faran’ny taona 2017. Ny DFP kosa dia mbola ao anaty fitetezam-paritra hatrany saingy sahirana kosa amin’ny fanapariahana ireo kiboky (Prospectus) fampahafantarana izay tokony ho fantatra momba ny tontolom-pifidianana izay.